Ngikhona nje kungomusa kaNkulunkulu | Scrolla Izindaba
Ngikhona nje kungomusa kaNkulunkulu
UGrace Baloyi ukholelwa ukuthi uNkulunkulu umsindise ekufeni ngesikhathi inhlamvu iphaphalaza ingena ngqo endaweni abehleli kuyo ngemuva kokuthi asukume eyothandaza.
UGrace, oneminyaka engama-45, wase-Alexandra, uthe kube yimizuzu embalwa kuya ehoreni lesishiyagalolunye, wayehleli kusofa ebuka i-soapie yakhe ayithandayo, i-The Queen. “Njengoba isikhathi sasisondela kwihora lesi-9, ngasukuma kusofa ngoba ngiya emuthandazweni ngalelo hora njalo ebusuku.”
Izinhlamvu zangempela zehla ngophahla zashaya usofa lapho bekuhleli khona uGrace.
“Ngokushesha ngemva komthandazo wami omfushane egumbini lami lokulala, ngazizwa ngikhathele. Ngazizwa nginqena ukubuyela egumbini lokuphumula ukuze ngiqhubeke ngibuke umabonakude. Ngenkathi ngizama ukunquma ukuthi ngibuyele emuva noma cha, ngezwa umsindo ongajwayelekile uqhuma endlini yokuphumula.
“Kuzwakale sengathi kuqhume isibani,” esho.
UGrace uthe uzwe indodakazi yakhe eneminyaka eyi-17 ubudala ebisesegumbini lokuphumula imemeza futhi imtshela ukuthi kunenhlamvu endlini yokuphumula engena ngophahla.
“Indodakazi yami iyona engitshele ukuthi inhlamvu ishaye yaqonda ngqo lapho ebengihleli khona.
“Ngesikhathi ngifika endlini yokuphumula, angizange ngikholwe engakubona ngamehlo ami. Ukube angizange ngisuke kulowo sofa, ngabe sengilele emakhazeni manje. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wangisindisa. Ngikhonza uNkulunkulu nokhokho bami abangibhe njalo,” esho.
UGrace uthe kuze kube namuhla, akazi ukuthi le nhlamvu ibivelaphi.
“Enye into engingakutshela yona ukuthi kunezibhamu eziningi e-Alexandra.
“Mhlawumbe kukhona abantu abebelwa ndawana thile, bese omunye umuntu wadubula emoyeni inhlamvu yabuya yadlula endlini yami. Kungenzeka noma yini. Kuyasabisa kakhulu,” esho.
Uthe yena nendodakazi yakhe abakhonanga ukulala ngalobo busuku. Bebekhathazekile ukuthi enye inhlamvu ingahle ingene ezindlini zabo zokulala.
“Indodakazi yami isahlukumezekile, ikakhulukazi uma izwa umsindo ongalindelekile endlini. Noma ngubani owenze lokho weba ukuthula kwethu endlini,” kusho uGrace.
UGrace uthe ukudubula isibhamu noma yikuphi, noma ngabe uyakholwa ukuthi kuphephile, kungaba nemiphumela emibi. “Izimpilo zabantu abaningi sezishintshe zaba zimbi ngenxa yezinhlamvu ezingabaqondile.”